Akụkọ - Jikọọ Aka Iji Lụ Ọrịa Ọrịa
Na Machị 4, 2020, ụgbọ elu si Brazil rutere na nchekwa na Shanghai, na-ebu nkpuchi PFF2 20,000 nke Lianhe Chemical Technology Co., Ltd. Nyere na Taizhou Red Cross. Nke a bụ usoro ọgwụ nke ise nke Lianhetech nyere kemgbe COVID-19. Ntiwapụ nke ndị na-enweghị obi ịhụnanya, onyinye afọ ofufo na-egosipụta ibu ọrụ. Iji kwado nkwado na njikwa nke COVID-19 n'ụzọ zuru oke ma kwado ụkpụrụ ụlọ ọrụ nke "iburu ibu ọrụ", ka ọ na-erule na ngwụcha ọnwa Jenụwarị, Lianhetech bidoro ịchịkọta akụ na ụba ụwa n'ụzọ zuru oke, site n'aka ndị enyemaka UK na ndị ahịa ofesi iji zụta ihe nkpuchi na uwe nchebe dị ụkọ na China. Ndị ọrụ ibe ụlọ na nke esenidụt, ndị ahịa ịhazi ị nweta, njem, yana ọsọ ọsọ kachasị nke ihe mkpuchi dị mkpụmkpụ, uwe nchebe na China. 8 Feb 8, 100,000 na-ekpuchi ihu nke Fine Organic Limited, onye enyemaka Britain, rutere China. Ka ọnwa nke iri na abụọ dị na mkpụrụ ụbọchị iri na abụọ, otu puku na narị iteghete na-abịarute China, na abali iri na asaa nke ọnwa Febụwarị, ihe ruru nkpuchi 2,000 na ihe karịrị narị isii nke uwe nchekwa bịara China. FMC onye ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ na mba ọzọ nyeere ụlọ ọrụ ahụ aka ịzụrụ uwe nchekwa 500 na mkpuchi ihu si Denmark na Brazil. Ruo ugbu a, Lianhetech enyefela ihe karịrị nkpuchi 120,000, usoro 3,000 nke uwe nchekwa na ihe ndị ọzọ bara uru karịa 700,000 yuan na Taizhou Red Cross Society. Nsogbu n'otu akụkụ, kwado n'akụkụ niile. Egwula ihe agha, n'ihi na nke m bụkwa nke gị ka ị na-eyi Lianhetech Technology ga-aga n'ihu ịgbaso mmepe nke ọrịa ahụ ma nye aka na mmeri n'ọgụ a na-alụ.
Post oge: Mar-15-2021